I-Lighthouse Mini Cabin e-Palo Duro Canyon Rim - I-Airbnb
I-Lighthouse Mini Cabin e-Palo Duro Canyon Rim
363 okushiwo abanye
Woza ujabulele ukuhlala kwakho ngokubukwa Okumangalisayo kwe-Palo Duro Canyon kusuka kukhabethe lethu lesimanje elincane! Le ndawo yokucasha encane ilala izivakashi ezingaba ngu-2 futhi itholakala nje ezinyathelweni zokungena ePalo Duro Canyon State Park ebabazekayo.
I-Mini Cabin yethu ihlezi onqenqemeni lweCanyon e-Palo Duro Zipline & RV Park futhi ibheke ngaphandle ibheke empumalanga inokubukwa okumangalisayo kwe-State Park. Lesi sikhala saziwa ngokuthi yi-Lighthouse cabin, singu-170sq ft sinombhede kasayizi wendlovukazi othokomele, i-tv, igumbi lokugezela, ikhishi- elifaka ifriji elincane, i-microwave, usinki nomakhi wekhofi. Igumbi lokugezela libanzi futhi linokuhamba ngeshawa kanye nekhabethe elincane. Amawindi agcwalisa isikhala ngokukhanya kwemvelo usuku lonke futhi anikeza umbono ophelele weCanyon. Idekhi ine-propane grill ene-burner ukuze ujabulele ukudla okulula okuphekwe ngaphandle uma ukhetha.
I-Lighthouse Cabin itholakala emnyango we-Palo Duro Zipline & RV park, iqhubeke ngesango lepaki ye-RV futhi itholakala kwesokunxele, esingasempumalanga. Isikhathi sokungena singo-3pm noma kamuva. Ukufinyelela kungokhiye ongenakhiye lapho uzonikezwa khona ikhodi ngaphambi kokugunyazwa, ukuze ukungena ebusuku kakhulu akuyona inkinga. Isikhathi sokuphuma ngu-11am.
Akekho okufanele aqale usuku lwakhe ngaphandle kwe-caffeine - ngakho-ke uzothola uhlobo oluthile lwetiye, ikhofi, nokhilimu ukuze uthole amandla, kanye nokudla okulula kwasekuseni.
Sikukhuthaza ukuthi usebenzise idekhi, lapho sinikeza khona izihlalo ezimbili, igrill kanye nebhlokhi yothango lomoya osenyakatho ngalezo zinsuku ezishisayo ze-panhandle. I-bug spray ne-sunscreen iyatholakala ekhabetheni.
I-Smart WIFI TV ihlinzekwa ukuthi ungakwazi ukufinyelela i-akhawunti/ama-akhawunti akho e-Netflix, e-Prime, e-Hulu(njll).
Pholisa isikhala nge-Window Unit Air Conditioner kanye nefeni yophahla.
Igumbi lokugezela lihlotshiswe ngokuphelele ngamathawula ahlanzekile, izinto zokugeza eziyisisekelo- ishampoo, okokulungisa nokugeza umzimba. Uma udinga amathawula engeziwe sigcina izinsimbi ekhabetheni, kanye nesomisi sezinwele, nensimbi.
Ngezinjongo zokuphepha, siyacela ukuthi zonke izihambeli zethu zibe nephrofayela ephelele ye-Airbnb ngaphambi kokuba samukele izicelo zokubhukha. Ulwazi lokuxhumana oluyisisekelo (inombolo yocingo nekheli le-imeyili) kufanele luqinisekiswe, kanye ne-ID yakho yokungaxhunyiwe ku-inthanethi (isb. ilayisense yokushayela) kufanele ixhunywe ku-akhawunti yakho.
Siyi-txt noma ucingo nje futhi singaba lapho cishe emaminithini angu-10 nganoma yini engase idinge ukunakwa.
Sicela wazi-Okwamanje wengeza amanye amakhabethe ukuze izivakashi ziwajabulele ukuze kube nomsindo wokwakha.
I-Zipline & RV Park isendaweni efanayo, ngakho-ke ungase ubone ezinye izihambeli ziza futhi zihamba, zihamba, zikanisa & zip usuku lonke.
Ikhabethe le-Lighthouse futhi liyindawo efanelekile yokubuka ukuphuma kwelanga kwe-panhandle ngaphakathi noma ngaphandle ngaphandle. Nethezeka futhi ujabulele ukuhlala kwakho eCanyon eduze kwasePalo Duro Canyon State Park.
Umnyango wePalo Duro State Park ucishe ube ngu-500ft ukusuka e-RV Park.
4.98 · 363 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-363